अपर तामाकोसीमा स्थानीयको प्रोक्सी बदर, साधारणसभा भने असार ३१ मा « GDP Nepal
अपर तामाकोसीमा स्थानीयको प्रोक्सी बदर, साधारणसभा भने असार ३१ मा
Published On : 30 June, 2019 7:42 am
काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारणसभा असार ३१ गते हुने भएको छ ।
अघिल्लो साता बोलाइएको साधारणसभामा गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै स्थगित भएपछि नयाँ मिति तय भएको हो । कम्पनी ११ औं साधारणसभाले ४ नयाँ सञ्चालक चयन गर्ने भएकाले यसलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाबाट संकलन गरेको अधिकांश प्रोक्सी बदर भएको छ । स्थानीयको प्रोक्सीमा सेयरधनी नं. र दस्तखत नमिलेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतले रद्द गराएका हुन् ।
कम्पनीले देशकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडमा सर्वसाधारणका तर्फबाट सञ्चालक बन्न १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । ४ जना सञ्चालकका लागि ३ महिलासहित १२ जनाको उम्मेदवारी परेको हो ।
सर्वसाधारण सेयरधनी समूह (ख) बाट सञ्चालक बन्न मनोनयन दर्ता हुने समयसम्म उक्त आवेदन परेको हो । कम्पनीमा ८ लाख १८ हजार सेयरधनी छन् । सेयरधनी सबैले सञ्चालक छनोट गर्न मतदान गर्न पाउनेछन् ।
कम्पनीको सञ्चालक बन्नका लागि प्रकाश भुषाल, डा. प्रदिपकुमार मैनाली, अशोक बुढाथोकी, हरिप्रसाद भुर्तेल, गोसाइँ केसी, कल्याणी रिमाल, सिर्जना सुवेदी, प्रकाश तिवारी, विश्वनाथ शर्मा, लोकेन्द्रबहादुर साउद, सुशिल पोखरेल र रामहरि शर्मा दौडमा छन् । मैनाली, केसी, रिमाल र पोखरेल दोलखाबासी हुन् ।
रामहरि शर्मा नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् भने विश्वनाथ शर्मा र साउद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारी हुन् ।
एक वर्षअघि स्थानीयलाई सेयर वितरण गरे पनि आयोजना प्रभावित स्थानीयसँग सेयर आवेदन गरेको फारामको अर्धकट्टीवाहेक कुनै पनि प्रमाणपत्रसमेत छैन । कम्पनीले स्थानीयलाई न त सेयरधनी प्रमाणपत्र वितरण ग¥यो न त डिम्याट खातामा नै जम्मा गरेको छ । स्थानीयले सेयर आवेदन गर्दा डिम्याट खाता नं. राखे पनि अहिले प्रोक्सीमा त्यही डिम्याट खाता नं. राख्दा रद्द भएको छ ।